Mhinduro yekutadza kuzarura neApple Watch ichauya nekukurumidza | IPhone nhau
Vamwe vashandisi vari kuudza dambudziko nebasa rekuvhura iyo iPhone 13 neApple Watch. Iri dambudziko rinoratidzika kunge rakapararira nekuda kwe "kutaurirana" pakati pewachi neiyo nyowani Apple chishandiso, chimwe chinhu chakashata uye nekudaro Izvo hazvivhure neApple Watch kana isu tiine basa rakaitwa.
Dambudziko iri rinoratidzika kunge rinotonyanya kunetsa nhasi nekuti kushandiswa kwemask kunosungirwa munzvimbo zhinji dzenyika. Nebasa racho rinoshanda, wachi ndiyo inoona nezvekuvhura iyo iPhone asi kana basa iri rikatadza tinofanira pinda kodhi yenhamba kana bvisa mask ...
Apple iri kutoshanda pane mhinduro ichauya mune inotevera inodzokorora
Ivo havana kuratidzira zviri pamutemo zuva iro rinotevera vhezheni yesoftware richaburitswa iyo iPhone asi ivo vanoratidza kubva kuCompertino kambani kuti inotevera vhezheni yesoftware ichagadzirisa dambudziko iri. Chinyorwa chemukati cheApple chakatsigira online uye chakaburitswa nenhepfenyuro senge 9To5Mac inoratidza izvozvo Ivo vachagadzirisa kutadza nekukurumidza sezvazvinogona.
Apple yakaratidza nyaya apo Kuvhura neApple Watch kungasashande paPhones 13. Unogona kuona meseji "Haikwanise kutaurirana neApple Watch" kana iwe ukaedza kuvhura yako iPhone wakapfeka chifukidzo, kana iwe ukaona Iwe haugone kumisikidza kuzarura. pamwe neApple Watch.
Iyi haisiyo nhau dzakanakisa dzinogona kugamuchirwa nevashandisi veApple smart wachi uye iyo itsva iPhone 13. Kunyange chiri chokwadi kuti kudzamara vaburitsa vhezheni iyi vanofanirwa kuita vasina nzira yekuvhura, Apple yakagadzirira kuitika kwedambudziko uye ndichaigadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona. Dzimwe nhepfenyuro dzinotoratidza izvozvo Iyo iOS 15.0.1 vhezheni inogona kuburitswa kugadzirisa uku kukundikana mune nyowani iPhone 13. Tichave takamirira nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Mhinduro yekutadza kuzarura neApple Watch ichauya nekukurumidza
Iye zvino inowanikwa muApple Arcade LEGO Star Wars Hondo